Homwe inovandudzwa nezvimwe zvinoverengeka maficha senge "anofarira" | IPhone nhau
Pocket, kune avo vasingazvizive, iko kunyorera kunogona kuvandudza kugadzirwa kwako zvakanyanya, nechikumbiro ichi chakanyatso nyongedzwa muIOS, tinogona kusevha zvinyorwa kubva kumawebhusaiti edu aunofarira kuti uverenge gare gare, kuti iwe ugogona kuziviswa chero nguva uye chero kwaunoda pasina chikonzero chekushandisa Safari. Iyo zvakare ine mukana wekugovana akati wandei mapoka ebasa kana kutoverenga zvinyorwa zvinonzwika kwauri. Homwe ndeye muchinjiko-chikuva application uye Iyo ine yakakura timu yekuvandudza kuseri kwayo iyo inotinunzira isu yakawanda nhau mune ino nyowani yekuvandudzaKunge "likes" uye reposts, isu tinokuudza mashandiro avo.
Kana iwe ukatevera vanhu vari muPocket, ikozvino unogona kupira "like" kuzvinyorwa, uye kuzvishambadza zvakare, izvo zvakafananidzirwa kuTwitter retweets, ndokuti, kuti nhau dzichaburitswa pabhodhi redu, inzira inokurumidza uye nyore izvo zvichatiponesa nguva.
Chii Chitsva muVhezheni 6.3.0
Kufarira uye Kudzoka Kuuya! Iye zvino unogona "kuda" uye kudzorerazve zvirevo zvevanhu vaunotevera paPocket. Iyo inzira huru yekuratidza kuti unokoshesa zvakadii kurudziro dzawafarira. Vhura yako Wall yeMazano muPocket uye edza izvi zvitsva maficha!
- Maka se «senge» uye dzorerazve kubva kune yako Kurudziro madziro
- Tsvaga kana mumwe munhu achida kana kutumira zvakare imwe yemazano ako nezvikumbiro zvePush
- Iwe unozogona kuwona pane ako Kurudziro madziro izvo zvekare zvinyorwa zvevanhu vaunotevera
- Tarisa mukati Sarudzo kuti ndeapi ma ziviso aunoda kugamuchira kubva kuPocket
- Isu takagadzirisa bug nezwi "Alex", iro raitaura zvishoma zvishoma kana uchiverenga zvinyorwa zvePocket (Waizviziva here kuti Pocket inokwanisa kukuverengera zvinyorwa zvaunoda zvinonzwika? Vhura chero chinyorwa uye wadzvanya ● ● ● kuti utange kuteerera)
- Madiki madhiragi akagadziriswa uye akasiyana siyana kugadzirisa
Iyo yakajairwa vhezheni yePocket yakasununguka zvachose, kunyange ichisanganisira mamwe maPrimiyamu mabasa anobhadharwa, iyo nzira iyo ingangoita vese vagadziri vava kushandisa kutora mukana webasa ravo. Kwete chete iyo muchinjika-chikuva, ndiko kuti isu tinoiwanawo mu macOS uye Windows, iri zvakare Universal, zvese zve iPhone ne iPad uye iPod Touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Homwe inovandudzwa nezvimwe zvinoverengeka maficha senge "anofarira"
Tim Cook kushanyira China kunosangana nehurumende